Luo Nuer iyo Murle oo diriray - BBC News Somali
Luo Nuer iyo Murle oo diriray
30 Disembar 2011
Image caption Luo Nuer
Qaramada Midoobay iyo ciidanka Sudanta koofureed, SPLA, ayaa labaduba isku dayaya in ay badbaadiyaan rayidka, hase yeeshee waa hawl adag.
Lix kun oo nin oo hubeysan ah qabiilka Luo Nuer ayaa haddadaas dhex socda gobolka Jonglei. Waxaa ka go'an in ay weeraraan qabiilka ay isku kacsan yihiin ee Murle.
Ciidankaas duullaanka ahi waxay gubayaan wax kasta oo ay dariiqa ku arkaan, lo'dana wey dhacayaan. Iyaga oo ka baqaya duullaanka ku soo socda, ayaa tobannaan kun oo qabiilka Murla ay ka qaxeenmagaalada Pibor. Isuduwaha hawlaha aadminnimada ee QM ee Sudanta Koofureed, Lisa Grande, ayaa BBC u sheegtay in hal battalion oo ciidanka dagaalka ah ay hadda ku sugan yihiin Pibor. Isla markaana ciidan gurmad ah ayaa u soo socda ayay tiri in ay xoojiyaan SPLA.
Talaadadii dagaalyahannada qabiilka Luo Nuer waxay gubeen oo dambaska ka dhigeen magaalada Lukangol.
Qiyaastii 2 kun oo ka mid ah dadkii magaalada degganaa wey ka baxsadeen itii aan la gubin. Lama oga inta lagu dilay magaalada. Wararka qaar ayaa sheegayaa in tobannaan ay labada dhinacba ka dhinteen.
Madaxweyne ku xigeenka Sudanta Koofureed, ayaa u kala dab qaadayay labada qabiil. Shalay waxay u muuqatay in uu ka dhaadhiciyay Luo Nuer, in aanay weerarin Pibor. Laakiin ayaga oo kumanyaal ah ayay xalay soo guureeyeen oo u dhaqaaqeen dhinaca Pibor.
Weerarrada labadan qabiil hore wey u dhici jireen, laakiin hadda oo ay heleen hub casri ah xaaladdu wey ka dartay. In ka badan kun ruux oo haween iyo carruur u badan ayaa la dilay tan iyo bishii Juun.
Waxay u muuqataa in dhibku ka billowday lo' la dhacay, hase yeeshee, dilal aargoosi ah oo ka dambeeyay ayaa xaaladda ka dhigay mid faraha ka baxday.